ကြက်ဥအမှုန့်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုသိုလှောင်ရမယ်ဆိုတာပြောပြပါ၊ သော့ခတ်နှင့်အတူလေဟာနယ်အိတ်၌သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီလို ဒါမှမဟုတ်တင်းတင်းအဖုံးနဲ့ဖန်ခွက်အိုးတစ်လုံး ...
အကောင်းဆုံး Cobra ချက်ပြုတ်နည်းများ !!! မြင်းခွာဒီမြင်းခွာကိုအေးမြ။ မှောင်မိုက်သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးဆောင်းတွင်းအားလုံးရပ်တည်နိုင်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး 1 ကီလိုဂရမ်။ ကြက်သွန်ဖြူ 100 ဂရမ်။ horseradish 100 ဂရမ်။ Tsp ဆား 1-2 , ...
ငါ့ကိုဆောင်းရာသီအတွက်ပျားရည် agarics pickling များအတွက်သက်သေပြချက်စာရွက်ကိုပြောပြပါ။ မှိုများအတွက် Marinade (ပျားရည်မှိုများ, boletus, အဖြူစသည်တို့) ရေ 1 လီတာ;2tbsp ။ ဌ။ ဆာဟာရ; ၄ Tsp ဆားငန်; ၃ ...
3 litas တွင်ဝက်ဆီဆားရန်မည်မျှအရသာရှိသနည်း ဘဏ်လား ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း - အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ / လေးညှင်းပွင့် / ဆား၊ ဝက်ဆီ၊ လတ်ဆတ်၊
ဆောင်းတွင်းအတွက် sorrel အေးခဲအောင်ဘယ်လို? ဆောင်းတွင်းအတွက် sorrel ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ - ဆောင်းတွင်းအတွက် sorrel ကိုပြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကအေးခဲနေတယ် sorrel အေးခဲစေရန်, သုတ်ခြင်း။ ဖြတ်ထည့်ပါ
ယောက်ျားများ! လရဲ့ဘယ်အဆင့်မှာဂေါ်ဖီထုပ်ကိုစိမ်သင့်သလဲ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ! ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲ! ငါဂေါ်ဖီထုပ်ကောက်နေတာကြောင့်ငါလကိုဘယ်တော့မှမကြည့်။ ဒါ့အပြင်အောက်တိုဘာလကုန်မှာငါစစားခဲ့တယ် ...
ငရုတ်ကောင်းပူနှင့်ချဉ်သောငရုတ်ကောင်းရည်ကိုအဘယ်သူသိသနည်း။ ငါတကယ်စာရွက်လိုအပ်ပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကိုဆေးကြောပြီးမိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုသွန်းလောင်းပါ။ ငရုတ်ကောင်းကိုအိုးထဲထည့်ပြီးသာမာန်ရှလကာရည်နဲ့လောင်းပါ။
သခွားသီးကိုအေးခဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ မည်သူမဆိုကြိုးစားခဲ့ပါသလား ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? ရေခဲပြီးနောက်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ပွက်ပွက်ဆူနေသောကဲ့သို့တူညီသော။ ၎င်းသည်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူ။ မတူ၊ အရသာတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သခွားသီးကိုအေးခဲနေပြီ။
Sauerkraut မှန်ကန်စွာဆားမည်သို့နည်း ဖျက်စီးခြင်းဂေါ်ဖီထုပ်, တစ်ဘူးကိုအပေါ် Markov ပွတ်သပ်, အသုပ်ထက်အနည်းငယ်ပိုဆား (သင်ကြိုးစားရပါမည်) ကစော်ဖောက်ခြင်းအဘို့အသကြားအနည်းငယ်ထည့်သွင်း, ပူစီနံအောက်မှာဂေါ်ဖီထုပ် mash ...
ဂျပန် Quince မှာဘာအရသာရှိနိုင်ပါသလဲ ဂျပန် Quince မှ Quince 1 ကီလိုဂရမ်, သကြား 1,31,5 ကီလိုဂရမ်, ရေ 11,5 ခွက်ကနေ Jam ။ သစ်သီးဝလံများကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပါ (ကြီးမားပါကအချပ်များပါ) အစေ့များကိုရှင်းလင်းပါ။
saltpeter ကဘာလဲငါဘယ်မှာရနိုင်သနည်း ဒါဟာအသားဆားများအတွက်အားလုံးချက်ပြုတ်နည်းများမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Saltpeter (အစားအစာ) ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်၎င်း၏အရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဝက်အူချောင်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည် ...
ပန်းသီးခြောက်ခြင်းအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းများမှာအဘယ်နည်း။ ဘယ်သူလုပ်သလဲ ကျနော်တို့အထူးလေမှုတ်စက်တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကို ၁၂ နာရီကြာခန်းခြောက်စေတယ်။ ဒါပုံမှန်လား? မီးဖို၌ ၁၂ နာရီမျှမခြောက်ပါ။ သို့သော် ...
စပျစ်ဝိုင်မည်မျှကြာမည်၊ တစ်ပါတ်၊ ၂ မည်နည်းအားလုံးပျော့ဖတ်နှင့်အတူနှစ်ပတ်လုံးကြီးထွားလာခြင်း၏တင်းကျပ်မှုပေါ်မူတည်သည်။ strain၊ ပုလင်းများထဲသို့သကြားထည့်ပြီးသကြားနှင့်ဖော့ဆို့ထည့်ပါ။
ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဓားမရှိလျှင်သံဘူးကိုဖွင့်နည်း။ ၁ ဖန်ခွက်အိုးတလုံးဖွင့်ခြင်းပြtheနာနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ရလျှင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်တံတောင်ဆစ်နှင့်အတူ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂရုတစိုက်လုပ်ပါ ထား ...
အနာဂတ်အတွက်အသုံးပြုရန်ဝက်ဆီဘယ်လို? ဘူးခွံများနှင့်လှိမ့်၌တစ်နည်းနည်းနဲ့, အဘယ်သူသည်စာရွက်ကိုမှတ်မိ? ငါသေတ္တာ၏အောက်ခြေတွင်ဆားအနည်းငယ်လောင်း။ ဆားကိုပန်းကန်လုံး (သို့) ပန်းကန်လုံးထဲထည့်လိုက်တယ်။
အဘယ်ကြောင့် sauerkraut ဖျော်ရည် "snotty" ထွက်လှည့်? ငါပြင်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုထုတ်ပစ်လို့ရမလား။
အဘယ်ကြောင့် sauerkraut ဖျော်ရည် "snotty" ထွက်လှည့်? ငါပြင်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုထုတ်ပစ်လို့ရမလား။ အဘယ်ကြောင့်လွှင့်ပစ်? သင်ကနေနေတဲ့ hodgepodge ကြော်နိုင်ပါတယ်! ကောင်းပြီ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊
ခရမ်းချဉ်သီးများကိုရွေးချယ်ရန်အကောင်းဆုံးစာရွက်ကိုပြောပြပါ။ ဒီခရမ်းချဉ်သီးတွေကိုကြိုက်တယ် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်စိမ်းလန်းသောခရမ်းချဉ်သီးများ - ၁၀ ကြက်သွန်ဖြူ၏အကြီးအကဲများ - ၂ parsley ၏ကြီးမားသောအဆီ - Marinade အတွက် - ရေ ၅ လီတာ - ၂၅၀ ဂရမ်ရှလကာရည် - ၂ ခွက်ဖလား ၂ ခွက် ...
မည်သူမဆိုလေဟာနယ်ထုပ်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား ဒါ့အပြင်ကြော်ငြာမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံတွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ဤအ lids ရေခဲသေတ္တာထဲမှာချက်ချင်းဖွင့်လှစ်။ နှင့်အိမ်တွင်း, နာရီဝက်ထက်မပို။ အိုးတလုံးကိုအိုးတစ်လုံးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားသလိုမျိုး။
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,975 စက္ကန့်ကျော် Generate ။